रमेश प्रसाईको पर्देशीलाई रूहाउने अर्को गीत ‘जुनी बित्यो अरबको खाडीमा’ (भि’डियो सहित) – Ap Nepal
लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो सम’य एकपछि अर्को गरेर गीतहरु आउनेक्रम बढे’को छ । मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिकजसो बजारमा आईरहेका छन् । त्यसो त रमा’ईला, नचाउने किसीमका गीतह’रुपनि बजारमा आईरहे:का छन् तर बढिजसो मायाप्रे’मका गीतहरु आउने गर्छन् कारण यस्ता गीतलाई दर्शकश्रोताले रुचाउछन् । समस्त लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोता’को नजरमा लोक’प्रिय भन्दै गएका छन् ।
कति गितहरुले त करो:ड क्लव प्रवेश गरिस’केका छन् त कति गर्ने बालामा छन् । यसै सन्दर्भ बजारमा धेरै सर्जकले आफ्नो गित दर्शक स्रोतामा पठाएका र क’यौ माया पाए’का छन् । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकप’छी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । सोहि क्रममा प्रखर वक्ता तथा गायक रमेश प्रसाईको स्वर रहेको ‘अरबको खाडीमा’बोल’को गीतको भिडियो सार्वज’निक गरिएको छ ।
रोजगा’रीको सिलसि’लामा विदेश उडेको युवाको कथा र पूर्वेली भाका समेटिएको ‘अरबको खाडीमा’बोलको गीतमा प्रेम चौला’गाईको शव्द, चर्चित गायिका मि’लन नेवार र रमेश प्रसाईको स्वरमा रहेको गीतलाई चर्चित संगीत’कार राजनराज शिवा’कोटीले संगीत शृजना गरेका छन् ।राजेश पुमा राईले निर्दे’शन गरेको भिडियोमा नेपाली भुगोल, संस्कृति, प्रेम र नेपाली युवा’हरुको दर्द उतार्ने प्रयास गरेको निर्माण यू’निटले जनाएको छ । प्रेम आ’दित्य म्यूजिक युट्युवबाट सार्वजनिक भएको गीतको भिडि’योमा मोडेल योगेन्द्र राई र सेसुका राईले अभिनय गरेका छन् ।
जसमा टिकटक बनाए:र सबैभन्दा बढी भ्यू:ज बटुल्ने प्रतिस्प’र्धीलाई पुरस्कृत गरिने बताइएको छ । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई क्रमशः १५ हजार, १० हजार र सात हजा:र नगद दिइनेछ । उत्कृष्टलाई अर्को गीतको भिडि’योमा अभिनय गर्ने अवसर दिइने निर्माता तथा गीतकार चौला’गाईले ओएस नेपा’लसँगको कुराका:नीमा जानकारी दिए ।
ओएस नेपालसँग कुराका’नी गर्दै चौलागा:ईले भने यो गीतले प्रवा’समा रहेका नेपाली दाजुभाईहरुको मन मष्तिष्क नै छोएको छ । उहाँहरुले मलाई फोन नै गरेर कस्तो मर्म’स्पर्शी शैलीमा हाम्रो मर्म भिडि’योमा उता’रेको भन्नुभएको छ ।
हेर्नुहो’स् रमेश प्रसाईको आवाज’मा रेकर्ड गरिएको पहि’लो गीतको भिडियो :
Prevसिधाकुरा जनतासँगको दोʼस्रो भागमा सम्झनाको दमʼदार प्रस्तुति -हेर्नुहोस (भिडियो सहित) !
Nextराउटेहरूले कसरी मनाउछन् सु; हागरात ? कलिलो उमेर १६ बर्षकी राउटे सुन्दरीसँग ३२ बर्षका राउटे युवाको बिबाह-यसरी सुनाउछन् कथा (भिडियो सहित)